खुसीको खबर : असार १५ बाट सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुने! गाडी भाडा बढ्ने, यस्ता छन् अबको नियम – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/खुसीको खबर : असार १५ बाट सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुने! गाडी भाडा बढ्ने, यस्ता छन् अबको नियम
लामो समय देखिको लकडाउनका कारण आफुहरुको लगानी डुबेको भन्दै गुनासो गरेका सार्वजनिक यातायात ब्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको तयारी गरेपछि उनीहरुले पनि राहत पाउने भएका छन् ।
ठूलो लगानी थन्क्याएर बस्नुपर्दा बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सार्वजनिक यातायात ब्यवसायीले बताएका छन् । उनीहरुको यस्तो गुनासो पछि यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका बनाएर अब सञ्चालनको तयारी गरेको हो ।